मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनको तयारी, अर्थमन्त्री शर्मा फेरिँदै, यी बन्दैछन नया अर्थमन्त्री ? – Points Nepal
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २३, २०७८ समय: १३:४६:०४
शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी सुरु भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुबीच मन्त्रिमण्ठल पुनर्गठन गर्ने समझदारी बनेको हो ।
सरकारमा रहेका चार वटै पार्टीले आफ्ना केहि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन लागेका हुन् । त्यसो त माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी र जसपाले यस अघि नै मन्त्रीहरुलाई आधा कार्यकालका लागि मात्रै नियुक्त गरिएको सन्देश सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।
काँग्रेससहित सरकारमा रहेका सबै दलहरुले आफ्ना केहि मन्त्रीलाई फिर्ता गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन हुनु अगावै मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गरिसक्ने योजनामा सत्ता गठबन्धन रहेको छ ।
‘मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका बारेमा गठबन्धनको उच्च तहमा छलफल भएको छ, केहि मन्त्रीरु हेरफेर हुनेछन् भने केहि मन्त्रालय समेत साटफेर हुन सक्छन्’, उच्च श्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।
श्रोतका अनुसार माओवादीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । शर्मालाई मन्त्रीबाट र्फिता गरेर पार्टी महासचिव बनाउन लागिएको माओवादी केन्द्र निकट एक नेताले बताए ।
शर्माको ठाउँमा बर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउने तयारीमा प्रचण्ड छन् । ‘अर्थमन्त्रीज्यूलाई फिर्ता बोलाएर पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेबारे शिर्ष तहमा छलफल भएको छ’, माओवादी केन्द्र निकट एक नेताले भने ।
डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रबाट सारेर अर्थ मन्त्री बनाउनेबारे पनि छलफल भैरहेको छ । त्यसो त ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि अर्थमन्त्रालयका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।
उता, नेकपा(एकिकृत समाजवादी)ले गतिलो मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान अघि सारेको छ । भौतिक पूर्वाधार वा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग समाजवादीले अघि सारेको छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबिच शक्ति संघर्ष चलिरहेको जसपाले पनि केहि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने जानकारी सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दिईसकेको छ ।
‘क–कसलाई फिर्ता बोलाउने र को को पठाउने भन्ने कुरा दलगत निर्णयमा भर पर्छ, मन्त्रिपरिषद पुनगर्ठनको कुरा भने शिर्ष तहमा उठेकै छ’, ति नेताले भने ।
यो पनि हेर्नुहोस, बाबुरामको विश्लेषण : प्रचण्ड ढुलमुले, ओली बचनका पक्का
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वचनका पक्का भएकाले एमसीसीको पक्षमा उभिने आशा व्यक्त गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो ढुलमुले स्वाभाव सच्याउनुपर्ने र एमसीसीलाई समर्थन गर्नुपर्ने डा. भट्टराईको सुझाव छ ।
एमसीसी सम्झौताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहीबार रातोपाटीसँगको अन्तरवार्ता भने, ओलीजीको मनपर्ने कुरा उहाँले आँटेपछि गर्नुहुन्छ, दोहोरो कुरा गर्नुहुन्न । हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न । मेरो आशा छ, केपीजीले ठीक अडान लिएर एमसीसी पारित गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ ।’
त्यसैगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिँदै पूर्वमाओवादी नेता डा. भट्टराईले भने, ‘मेरा परम मित्र प्रचण्ड एमसीसीको हकमा पनि ढुलमुल गरिरहनुभएको छ । उहाँको स्वभाव नै त्यस्तो । स्पष्ट धारणा नबनाउने, कता फाइदा हुन्छ, कता धेरै मान्छे छन्, त्यतैको पक्ष लिएर आफू पदमा बसिरहने । उहाँ चौथोचोटि ब्लन्डर गर्दै हुनुहुन्छ । यो चौथो गल्ती नगर्नुहोस् । गर्नुभयो भने उहाँलाई मात्र होइन, देशकै निम्ति ठूलो सङ्कटको विषय बन्न सक्छ । त्यो दोषको भागिदारी उहाँ बन्नुपर्ने हुनसक्छ ।’news parda ma xa yo news
Last Updated on: March 7th, 2022 at 1:46 pm